« Cybercriminalité » : Mpivady hiakatra fampanoavana -
AccueilRaharaham-pirenena« Cybercriminalité » : Mpivady hiakatra fampanoavana
Hatolotra ny Fampanoavana anio ireo mpivady voampanga amina raharaha « cybercriminalité », namoaka sary mamoafady miendrika faniratsirana tamin’ireny tambazotra facebook ireny. Ny polisim-pirenena no nisahana ny fikarohana sy ny fakana am-bavany azy mivady ireto araka ny vaovao azo, ary efa notanana eny amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana izy ireo hatramin’ny omaly.
Tokony ho fantatr’ireo olona mbola manana eritreritra hamoaka zavatra mamoafady sy fanalam-baraka amin’ireny facebook sy tambazotra ireny fa manana fitaovana ary fomba hiadiana amin’ity resaka « cybercriminalité » ity ny mpitandro filaminana. Tsy maintsy sarona avokoa izay rehetra manao izany ka entanina araka izany ny tsirairay mba hitandrina sy handinika tsara amin’ny zavatra ataony.
Fitaovana nentina hanamorana ny serasera sy ny fifandraisana ny facebook sy ny tambazotra fa tsy natao hanakorontanana, na koa ampiasaina amina resaka mamoafady sy fanalam-baraka. Niteraka resabe tokoa moa ity lalàna mifehy ny « cybercriminalité » ity tany am-boalohany, nahatsapa ny maha zava-dehibe ilay lalàna ihany anefa ny ankamaroan’ny olona, na ireo izay mpanenjika ny fanjakana tamin’ny fotoana nivoahan’ny lalàna aza moa nampiasa io « cybercriminalité » io rehefa nahatsiaro tena ho voatohintohina, raha tsy hiresaka afa-tsy ny raharaha nitorian’i Lalatiana Rakotondrazafy an’i Maherilanto Manandafy farany teo. Samy liana amin’izay ho tohin’ity raharaha “cybercriminalité” maha voarohirohy azy mivady ireto araka izany ny mpanara-baovao.